Unogona kundiratidza kuti ndingawana sei zvakanakira kumashure?
Pasati pane chimwe chinhu, chii chinoita kuti backlink yemhando ive? Kutorwa kazhinji, webhusaiti yako yebhishopi kana bhulogi inoongororwa neGoogle uchishandisa nhamba yezvimwe zvinhu zvakakosha, zvakadai sekubatanidza chiremera, ruzivo rwezera, kuenzanisa zvinyorwa zvinyorwa, masikirwo emagetsi emhando, nezvimwewo.Sei uchifanira kuziva kuti ungawana sei zvakakosha kumashure? Zvichida nokuti kazhinji kuzvivakira backlink kwave kuchangobva kuva chimwe chezvinhu zvinonyanya kukosha muSOO. Ndicho chikonzero iwe unofanira kuziva nzvimbo dzakarurama uye zviito zvakakodzera kutorwa kuti uwane zvekudzokera shure. Uye ini ndiri kuenda kuzokuratidza kuti ungawana sei zvakakonzera kumashure kubva kunzvimbo dzekugadzira vanhu, nyaya yekudhinda, zvinyorwa zvemashoko ekubudisa mabhuku, uye mawebsite ekugoverana magwaro - electric lemon squeezer nzd. Saka, regai tiongorore ivo vose vari pasi apa.
Zvechokwadi, nzvimbo yemazuva ano yehupfumi inobatsira kuvaka inobatana ne. Uye pane inenge gumi nemaviri emasangano ehupfumi uye masayiti edhidhiyo ayo ane vateereri vakawanda vevashandi vanoshandisa, zvakadai seGoogle Plus, Twitter, Facebook, nezvimwe.Chinhu ichi ndechokuti nzvimbo yose yepaIndaneti inozivikanwa pamusangano wehupfumi inowanzova nepamusoro peji yepamusoro. Ndosaka mukana uyu unonakidza unorudzirwa kuti uedzwe kuti uwedzere kubatana kwekuvakisa kutanga uye zvakakosha. Ramba uchiyeuka kuti nokuda kwezvakanakisisa izvi pano iwe unofanira kugadzirira purogiramu yekudzosa zvakare kana chirongwa chemashizha. Kuita kudaro, haungokureri kukura kwevateereri vako, asi tarisa vashandi vako vanogona kushandisa zvinyorwa zvakasiyana uye zvakasiyana-siyana zvinopa zvakakosha kukosha, zvakatsigirwa nemifananidzo yakakodzera, infographics, spreadsheets, nezvimwe.
Iyi nzira inogona kunge iri pakati penzira dzakanakisisa dzekuita kwepamusoro yekuita chikwata chekuvaka chikwata. Heino nzira yekuwana zvakanakisisa backlinks nemashoko ekutengesa - tsvaga kutsvaga mazwi akarurama uye kugadzirira zvinyorwa zvemashoko makuru. Zvadaro, tanga kushanda pane zvaunofanirwa kuendeswa kune imwe yezvinyorwa zvinyorwa zvinyorwa zvine mbiri. Nenzira iyo, usakanganwa kuisa hutano hunodzokera kumashure webhusaiti yako huru kana blog. Ingoita kuti zvinhu zvose zvivepo - magwaro maviri anchor, uye kugovana kwehutano mabhodhi kunofanira kuiswa zvakanaka mukati memabhuku ako ehutano.
Nzvimbo dzakadaro dzepa media dzinobata nhau dzinzvimbo dzakawanda dzekubata dzimwe hukama-nokuti chete zvese zvinotumirwa kunze zvinowanzosarudzwa nzvimbo shomanana dzinogona kuparadzirwa zvakanyanya paWebhu. Tichifunga kuti idzi huru dzemasayenzi nguva dzose dziri kutsvaga zvinyorwa zvitsva kana zvimwe nyaya dzinofadza dzevanhu vanofarira zvikuru, zvose zvaunoda ndezvipi kuti ugozvipa ivo nehurukuro yenyaya inofukidza nyaya inotyisa inoshandiswa kumakambani enyu makuru kana niche. Iva nechokwadi chekuita chibvumirano chekubatanidza uye zvinyorwa zvakakosha zvinogona kukwezva zvakananga kune vateereri - uye wapedza.
Izvozvo zvaizova imwe nzira yakanaka yekuvaka chivako chekugadzira, kunze kwekuwanzopa izvo zvakakodzerwa shure zvakakodzerwa neDoFollow. Uyezve, zvinyorwa zvakawanda kana zvakabatana zvakanyatsovimbwa nemitambo huru yekutsvaga seGoogle pachayo. Saka, mukana uyu unoratidzika semunhu akakodzera chaizvo, zvakarurama? Heino nzira yekuwana zvakanakisisa backlinks kubva pamagwaro ekugoverana mawebhusayithi - ivai nechikamu chekodzero chehutano hwehutano (i. e. , kwete zvinyorwa zvakanyanya, kana zvizere zvakakwana-zvigaro). Kana zvinhu zvose zvagadzirirwa, iwe unofanira kungozviisa pasi nokudaro uchideredza backlink inotaura nzira iyo iwe pachako iwe webhusaiti kana blog.